1. Ny voninkazoo manokana avy am-boalohany ary tsy misy franchise.
Ahoana ny fomba hanombohana ny fivarotanao voninkazo avy any am-boalohany ary tsy misy franchise. (Boky nosoratan'i A.A. Yelcheninov)
Ny hevitra ny fanokafana ny fivarotany voninkazo dia namangy imbetsaka ny olona iray izay ny fitiavany ny felam-boninkazo dia nanjary asa matihanina noho ny fitiavana voninkazo tsotra. Izay no nofinofiko hatrizay.
Tamin'ny taona 90 dia nanapa-kevitra ny hanangana orinasa voninkazo aho ary nanokatra ny kiosoko voninkazo voalohany. Nahomby ilay hevitra, ary nahavita namerina ilay fahombiazana tamin'ny fivarotana iray tany Etazonia. Vetivety dia nanana toeram-pivarotana marobe ahazoam-bola be aho. Heveriko fa ny zavatra niainako nitantana orinasa kely mahomby dia hahasoa ny maro. Amin'ity bilaogy an-tserasera ity dia hampahafantariko tsiambaratelo vitsivitsy momba ny fomba hanokafana ny fivarotanao kely izay mitondra fahafinaretana amin'ireo hetsika tianao sy valisoa vola amin'ny asanao.
Ahoana no nitantanako azy? Voalohany, nisy faniriana sy finoana lehibe ny tanjaky ny tena. Faharoa, fitiavana ny zavatra ataoko. Fahatelo, ny faniriana hamorona voninkazo whimsical ho fanaterana fehezam-boninkazo ary ny varotra ao anatin'ny rindrin'ny fivarotana, ny faniriana hahatsapa ny hevitra noforoniny ary hizara izany amin'ny hafa. Ny fikirizako handresy ny zava-tsarotra, mangetaheta hahazo izay tadiaviko, dia nanampy ahy hahomby. Haingana aho hizara aminareo ny zavatra niainako nifindra tamin'ny nofinofy ka nanokatra ny orinasan-tsainao manokana.
Toy ny fialam-boly hafa, ny fitiavana voninkazo dia mitaky fampiasam-bola ary maharitra fotoana lava. Tsikelikely, mivadika ho fahazarana izany, lasa mahazatra ny hetsika isan'andro, very ny fahatsapana zava-baovao. Tsy azo ihodivirana io fizotran-javatra io, mbola mijanona ihany raha te hiatrika ny toe-javatra. Fa tsy momba an'io ny resaka.
Tsikelikely, ny fahalianana tsotra amin'ny voninkazo dia mivadika ho tena fitiavana, mahasarika, miantso ary mifoka tanteraka ary tsy misy soritra. Ny mpianakavy dia tsy manalavitra an'io fomba io. Ny majika voninkazo dia manaitra ny olona rehetra izay farafaharatsiny tafiditra ao anatin'ilay dingana. Tsy azo ihodivirana ny fandraisana anjara ary tsy ho ela dia miezaka daholo ny mpianakavy hiara-hiasa hamorona tanjona iraisana.
Mila miomana hanova ny fomba fiaina mihitsy ianao. Izay nanapa-kevitra ny hanokatra orinasa voninkazo dia efa manana traikefa kely farafaharatsiny mifandraika amin'ny voninkazo. Na ahoana na ahoana, ny faniriana hivarotra voninkazo dia tsy mipoitra avy hatrany, na dia mety hitranga aza izany. Saingy amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, izany no ankanavaka noho ny lalàna. Ankoatr'izay, ny fotoana nivarotana bouquets tsotra nitondra tombony lehibe dia efa lasa. Ny tsenan'ny voninkazo maoderina dia feno entana isan-karazany, ary tsy miteraka fientanentanana sy fahalianana tsy azo eritreretina intsony izy io. Manintona ny olona ny serivisy miompana amin'ny mpanjifa, ny fomba fanao tsirairay. Ireo teboka rehetra ireo dia tsy maintsy raisina, ary voarindra tsara ny varotra.
Amin'ny pejy manaraka -> 1.2. Ny voninkazoo manokana avy am-boalohany ary tsy misy franchise.
2890 Fehezam-boninkazo laharana 125
23300 Безграничность чувств
Fehezam-boninkazo kryomma fotsy chamomile 9 amin'ny taratasy kraft.
2700 Fehezam-boninkazo laharana 396
Fehezam-boninkazo lisianthus manga sy fotsy 15 pcs, eucalyptus, limonium mavo 4 pcs amin'ny fonosana tsara tarehy.
6850 Fehezam-boninkazo an'i Lisianthus "kanto"
Eustoma (Lisianthus, raozy Japoney) - 2 pcs.
3780 Композиция "Гавайское утро"
Gypsophila - 5 pcs.
5400 Букет Beauty
Bush nitsangana - 25 pc.
6388 Букет «Первая любовь»